Sivavanye i-Tineco iFloor 3 kunye ne-A11 Master + yokucoca, ukucoca nokukhuhla ngaphandle kweentambo | Iindaba zeGajethi
Sivavanye i-Tineco iFloor 3 kunye ne-A11 Master + yokucoca, ukucoca kunye nokukhuhla ngaphandle kweentambo
Sivavanye ezimbini zeemveliso eziphambili zeTineco: IFloor 3, yokucoca nokucoca imigangatho ngokusebenza kakuhle, kunye ne-A11 Master +, ngokuzimela okugqwesileyo kunye nazo zonke iintlobo zezincedisi ezifakwe ebhokisini.
1 I-Tineco iFloor 3: ukucoca kunye nokukhuhla
2 I-Tineco A11 Master +
I-Tineco iFloor 3: ukucoca kunye nokukhuhla
Izicoci ezingenazintambo ezingenazintambo ziye zatshintsha indlela esisebenzisa ngayo ezi ntlobo zezixhobo zendlu. Ihlala ikufuphi kwaye ikulungele ukusetyenziswa nokuba lelona mzuzu ungalindelekanga, ngaphandle kweentambo ezingcolileyo kwaye zilawuleka ngokulula. Kodwa kwenzeka ntoni xa oko kuwa emhlabeni kuqulethe ulwelo? Kuthekani ukuba ukongeza ekucoceni izinto eziqinileyo sifuna ukukorobha umgangatho? Ewe, kulapho kanye apho le Tineco iFloor 3 vacuum cleaner ingena khona, kuba sisiporho-sokudibanisa esidibanisa ubuhle besicoci esinamandla kunye nesiporho esiya kuwushiya umphezulu owucocekileyo.
Ngezona zinto zibalaseleyo unokuzicela kwisixhobo soluhlu, le ifloor 3 vacuum cleaner iba yiyo ogqibeleleyo konke-in-nye naliphi na ikhaya:
Imoto eyi-150W yesicoci esinamandla nesineengxolo ezantsi (78 dB)
Ukuzimela kwemizuzu engama-25 kunye nebhetri ye-3000mAh egcwaliswayo egcwalisa kwakhona kwiiyure ze-4
Itanki yamanzi eyi-600ml
Itanki yobumdaka engama-500ml
Imowudi yokuzicoca ukuze ungangcolisi izandla zakho
Ukutshaja kunye nesiseko sokucoca ngokwakho
Inkqubo yokuhluza kathathu, kunye nefilitha yeHEPA (kubandakanya ukubuyisela)
Kubandakanya isicoci esingamanzi ukongeza emanzini kunye nakwizincedisi zokucoca
Enye yezinto ezazindikhathaza kakhulu xa ndibona uhlobo lwesicoci sokucoceka kukucoceka kwaso. Ukuxuba ubumdaka namanzi akuzange kube licebo elilungileyo kunye nezinto zokucoca, kwaye bendingazi ukuba le nto izakuphathwa njani kwiFloor 3. Nangona kunjalo, khange kuthathe xesha lide ukuba ndifumanise, kuba enkosi kwitanki ephindwe kabini (icocekile kwaye imdaka) kwisekethe ephindwe kabini efakiweyo, ubumdaka abusoze bufike nakweyiphi na enye indawo kwisicoci sokucoca ngaphandle kwetanki lokungcola.
Ukuyisebenzisa kulula njengokugcwalisa itanki ngamanzi acocekileyo, ukongeza isiciko sesisombululo sokucoca, ukuyisusa kwisiseko sokutshaja nokucofa iqhosha. Ukucoca emva kokusetyenziswa akunzima ngakumbi, kuya kufuneka ukhuphe itanki lamanzi emdaka, uyihlanze kwaye uyibuyisele endaweni yayo. Inkqubo yokuzicoca ikwagcina i-roller kunye nentloko ye-vacuum icocekile., nangona ukuba uyafuna ungayisusa i-roller xa uyifuna ukuyicoca ngakumbi. Ayisiyiyo isixhobo efuna ulondolozo olukhulu ukuze ihlale ilungile, kwaye iyaxatyiswa.
Isikrini sedijithali esikwabandakanyayo asisebenzi, kuba ibonisa idatha ebalulekileyo enjengebhetri eseleyo, isantya sokutsala (esilawulwa ngeqhosha kwisiphatho), imeko yeetanki zombini kunye nejamu ezinokubakho kwindawo yokucoca xa umntu Inkqubo yokucoca iyasebenza. Ukuba koku songeza ukuphatha okugudileyo ngaphandle kokujonga okucocekileyo, kunye nobunzima obuqulethwe Oko kukuvumela ukuba uthathe naphina, le iFloor 3 sisixhobo esihle sokucoca ikhaya lakho.
Elinye icala elandixhalabisayo yayikukuba ndingawuphatha njani umgangatho wendlu, ocekeceke njengoko uyipalati yomthi. Akukho ngxaki, kuba i-microfiber roller ithambile, kwaye Ukukhuhla okwenzayo kushiya kuphela umkhondo wokufuma okuthatha nje imizuzwana embalwa ukoma. Ingasetyenziselwa phantse naluphi na uhlobo lomphezulu: imarble, ukhuni, izinto zokwenziwa, ilinoliyam, njl. Umvelisi akacebisi ukusetyenziswa kwayo kwiikhaphethi okanye kwiindawo ezinoburhabaxa njengoko iziphumo zokugqibela zingenakuba zezona zifanelekileyo.
Inye kuphela "kodwa" endinokuyifaka kule vacuum cleaner-mop yile Ukuzimela kwayo kwanele nje ukucoca indlu okanye iflethi enobungakanani obuqhelekileyo, phantse kuhlala kuyimfuneko ukuyenza ngokwamacandelo amabini. Kodwa inyani kukuba ukusebenziseka lula kunye neziphumo zokugqibela ezigqwesileyo zenza ukuba le ngxaki ibuyele ngasemva, apho kufuneka songeze kulondolozo oluncinci olufunekayo. Ixabiso layo yi- $ 329 kwiAmazon (unxibelelwano)
I-Tineco A11 Master +
Esinye isicoci esingenazintambo asinantambo, kuqala, Isicoci esiqhelekileyo esicocekileyo nangona kukho izinto ezininzi ezimangazayo ngaphakathi kwebhokisi. Amandla okutsala kunye nokuzimela okukhulu ziimpawu zayo eziphambili, apho sinokongeza uluhlu olude lwezixhobo ezifakwe ebhokisini:
Amandla okuphuma angama-120W ngengxolo ephantsi
Inkqubo yokuhluza eyi-4, kubandakanya nefilitha yeHEPA
Itanki yobumdaka engama-600ml
Ukucoca iintloko ngezibane ze-LED ukukhanyisa iindawo ezimnyama
Isiseko sokutshaja nendawo yezixhobo kunye neshaja eyongezelelweyo yebhetri eyongezelelweyo
Iibhetri ezimbini zemizuzu engama-50 yokuzimela ngokupheleleyo (25 × 2)
Iintloko ezimbini ezipheleleyo ngebrashi ethambileyo kunye nokucoca okunzulu
Ukutshintsha isihluzo se-microfiber
Intloko encinci yokucoca iikawusi, izinto zokulala, njl.
Ukuthetha ngengqiniba ukufikelela kwiindawo ezinzima
Iibrashi zentloko, umlomo omxinwa ...
Njengoko ubona, kunzima ukucinga ngento engafakwanga kwibhokisi yale A11 Master +. Eyona nto ibalulekileyo yibhetri ephindwe kabini, ethi ngenxa yokuba isiseko sinendawo eyongezelelweyo yebhetri yesibini, ikuqinisekisa ukuba uhlala unemizuzu engama-50 yokuzimela ekhoyo, ngaphezulu kokucoca indlu yonke. Ukongeza, into yokuba ibhetri isuswe kuthetha ukuba xa isiba mandundu, unokuthenga enye ibhetri hayi isicoci esipheleleyo. Intloko ephindwe kabini iyaxatyiswa, apho ezinye iimveliso zikunika iroller eyongezelelweyo, iTineco ikhethe ukwenza izinto zibe lula kuthi kwaye zibandakanya iintloko ezimbini, ukuswitsha usiya kwenye uye ngonqakrazo, ngaphandle kokuqhaqha iiroller.
Isicoci sokucoca sinokuhamba kakuhle, siphethe ngokugqibeleleyo nangesandla nje esinye, kwaye iintlobo ngeentlobo zezincedisi ezibandakanyiweyo zikuvumela ukuba ufikelele kwikona engenakufikeleleka kwikhaya lakho: ngaphantsi okanye ngaphezulu kweekhabhathi, phakathi kweetafile zesofa okanye esofeni. ngasemva kweshelufu ngaphandle kokuyisusa. Ukucoca kusebenza kakuhle, kwaye itanki inkulu ngokwaneleyo ukuba ingabinanto ekugqibeleni.
Isicoci esinombane esinezinto ezintle onokuzifumana kwicandelo laso kwaye ikwabandakanya yonke into oyifunayo ukuze uzuze lukhulu kuyo, kubandakanya nebhetri eyongezelelweyo. Ukulungiselela imbeko ngekungekho bhegi yokugcina zonke izinto ezifakiwe. Inokuguquguquka, ukukhanya, ingxolo ephantsi kunye namandla, Le Tineco A11 Master + inokuthengwa kwiAmazon nge- € 389 (unxibelelwano)
IFloor 3 kunye ne-A11 Master +
Iqhubekeka kwaye kulula ukuyisebenzisa
Ukutshaja iziseko ezinezithuba zezincedisi
Ukuzimela okugqwesileyo kwe-A11 Master +
Uluhlu olubanzi lwezixhobo ezifakwe kwi-A11 Master +
Ukuzimela okufanelekileyo kweFloor 3
Ingxowa yokugcina eyongezelelweyo iya kuthakazelelwa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » Sivavanye i-Tineco iFloor 3 kunye ne-A11 Master + yokucoca, ukucoca kunye nokukhuhla ngaphandle kweentambo
I-Sonos ihambisa iRoam yayo entsha, engenazingcingo ngakumbi kwaye ephathekayo
Ukuvalwa kweLectulandia: ezona ndlela zingcono zi-5